दुव्वुरी सुब्बाराव | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता दुव्वुरी सुब्बाराव
भारतीय रिजर्भ बैङ्क
भारूको खुला कारोबार हुने नेपाल एउटा मात्र देश हो
भारतीय रिजर्भ बैङ्कको गभर्नरका रूपमा हालै आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गरेका दुव्वुरी सुब्बाराव अर्को २ वर्षका लागि पुन: नियुक्ति भएका छन् । आईआईटी कानपुरबाट कलेजस्तरको शिक्षा हासिल गरेका सुब्बारावले सन् १९७२ सर्वोत्कृष्ट भएर आन्ध्रप्रदेशबाट भारतीय निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । सन् २००७ मा अर्थमन्त्रालयको सचिव भएका राव त्यसभन्दा पहिला सोही मन्त्रालयका अर्थिक मामिला सचिव थिए । पूर्वीएशिया तथा अप्रिmकी देशहरूमा सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रका केही वर्षकाम गरेका रावले विश्व बैङ्कको प्रमुख अर्थशास्त्रीको कार्यभारसमेत सम्हालेका थिए । आन्ध्र विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका उनले अमेरिकाको ओहोयो स्टेट विश्वविद्यालयबाट एमएस गरेका हुन् । भारतीय तथा विश्व अर्थतन्त्रका साथै मौद्रिक अर्थशास्त्रमा दख्खल भएका राव नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा युवराज खतिवडाको निमन्त्रणामा दुईदिने नेपाल भ्रमणमा शुक्रवार काठमाडौं आएका थिए । सोही अवसरमा समसामयिक विश्वअर्थतन्त्र, नेपाल भारत आर्थिक तथा मौद्रिक सम्बन्धका साथै नेपाली बजारमा भारतीय मुद्राको प्रचलनका विषयमा उनले आर्थिक अभियान दैनिकलाई एक विशेष अन्तरवार्ता दिए । सुब्बारावसँग होमनाथ गैरेले गरेको वार्ताको सार :
नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली समकक्षीसँग केके विषयमा छलफल भयो ?
नेपाल-भारत आर्थिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित तथा दुवै मुलुकको चासो र महत्त्वका सबै विषयमा छलफल भएको छ ।
आरबीआईले विगत डेढ वर्षको अवधिमा झण्डै एक दर्जन पटक प्रमुख ब्याजदर (बैङ्क रेट) बढाइसक्यो । बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न यसरी ब्याजदर बढाउनुपरेको बताइएको छ । आरबीआईको सो कार्यले त्यहाँको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
अहिले भारतमा उच्च मूल्यवृद्धिका तीन प्रमुख कारण छन् । पहिलो, मानिसहरूको खाद्यवस्तु उपभोग प्रवृत्तिमा फरक आएको छ । विस्तारै अन्नबालीहरूका स्थानमा प्रोटिनयुक्त आहारहरूको प्रयोग बढ्दै गएको छ । मानिसको आयस्तरमा आएको सुधार यसको प्रमुख कारण हो । दोस्रो, अन्तरराष्ट्रिय वस्तुबजारमा विशेषगरी कच्चा तेलको मूल्यमा उच्चवृद्धि भएको छ । यसको प्रभाव पनि भारतीय मूल्यअवस्थामा परेको छ । भारतले कच्चा तेललगायत अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ठूलो परिमाणमा आयात गर्छ । कच्चा तेलमा हुने मूल्यवृद्धिले भारतमा पनि मूल्यवृद्धिको कारकको काम गर्छ । तेस्रो, खासगरी आयस्तरमा भएको वृद्धिसँगै वस्तु तथा सेवाहरूको मागमा वृद्धि हुनु पनि उच्च मूल्यवृद्धिको कारण हो । अहिले भारतको औसत प्रतिव्यक्ति आय झण्डै १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर छ । पछिल्ला वर्षमा ग्रामीण जनताको प्रतिव्यक्ति आयमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । यसरी भारतीय जनताको आयस्तरमा भएको लगातारको वृद्धिले समग्र मागमा चाप परेको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । उदाहरणका लागि गतवर्षमात्रै ज्यालादरमा २० प्रतिशत वृद्धि भयो । तर, औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर भने १० प्रतिशतभन्दा कम नै रह्यो । यसको अर्थ भारतको वास्तविक ज्यालादरमा लगातार वृद्धि भइरहेको छ भन्ने हो । यो परिस्थितिले समग्र माग र उपभोक्ता मूल्यवृद्धिमा चाप पारेको हो ।
यही कारणले विगत १५ महीनाको अवधिमा हामीले प्रमुख ब्याजदर ११ पटक वृद्धि गरिसकेका छौं । ब्याजदर वृद्धिको पहिलो उद्देश्य वस्तु तथा सेवाको मागको वृद्धिदर व्यवस्थित गर्ने हो । दोस्रो, अनुमानित मूल्यवृद्धि (एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन) मा नियन्त्रण कायम गर्नु हो । यसले समग्र मूल्यस्तर थप बढ्न दिँदैन र समयको अन्तरालसँगै विस्तारै तल र्झने अपेक्षा गरिन्छ । अहिले मूल्यवृद्धिदर उच्च रहनुका कतिपय कारणहरू आरबीआईको नियन्त्रणबाहिरका तत्त्वहरूबाट प्रभावित छन् । यस्तो अवस्थामा समग्र माग व्यवस्थापन गर्न र मूल्यवृद्धिदर घटाउन केही समय लाग्छ । यही वास्तविकतालाई बुझेर हामीले गत जुलाईमा प्रकाशित आरबीआईको प्रतिवेदनमा यस वर्षको अन्त्यतिरबाट मात्रै मूल्यवृद्धि घट्न सक्ने उल्लेख छ । हाम्रो प्रक्षेपणले सन् २०१२ को मार्चसम्ममा भारतको थोक मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा झर्ने देखाएको छ । त्यसपछि मात्रै उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदरमा कमी आउन सक्छ ।
हालै विश्वको प्रमुख क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘एस एण्ड पी’ले अमेरिकाको क्रेडिट रेटिङ ‘एएए’बाट ‘एए प्लस’मा झारेको छ । दक्षिण एशिया तथा भारतीय अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
भारतको अर्थतन्त्र र अमेरिकी बजारसँग यसको सम्बन्धमा केही बढी जानकारीहरू प्राप्त भएकाले म अहिले भारतकै बारेमा कुरा गर्छु अमेरिकाको रेटिङस्तर कम भएलगत्तै भारतको शेयरबजारमा उतारचढाव आयो । शेयरबजार परिसूचकहरूमा उच्चह्रास आयो । यसको प्रमुख कारण के हो भने कि त भारतीय शेयरबजारमा लगानी गरेका विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूले अमेरिकामा भएको घाटा पूर्ति गर्न यहाँको शेयर बेचे वा प्रतिकूल अवस्था आउन सक्ने अनुमानमा सुरक्षित भएर बस्न चाहे । कारण जे भए पनि उनीहरूको निर्णयले भारतीय बजारमा विक्री चाप बढयो । फलस्वरूप, गत सोमवार शेयरबजार लगभग २ प्रतिशत तल झर्यो भने मङ्गलवार पनि त्यस्तै भयो । तर, बुधवार र बिहीवार अधिकांश कम्पनीहरूको शेयरमूल्य उकालो लागेकाले बजारमा केही सुधार आएको छ । शेयरबजार घट्नुको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय मुद्राको विनिमय दरमा पर्यो । त्यसैले, सोमवार र मङ्गलवार भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर भयो । तर, बुधवारको बजारमा केही क्षतिपूर्ति भइसकेको छ । त्यसैले, अमेरिकाको रेटिङस्तर घट्नुको तत्कालीन प्रभाव शेयरबजार र विनिमय दरमा देखिएको छ ।
तर, यसको मध्यमकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न भने अझै केही महीना पर्खिनुपर्छ । त्यो पनि भारतबाट हुने पूँजी प्रवाहको अवस्था र त्यसको दिशा, अन्तरराष्ट्रिय वस्तुबजार, विश्वबजारमा भारतीय उत्पादनको माग र रेटिङ घटाउने निर्णय्रतिको विश्वसनीयतामा भर पर्ने देखिन्छ । यो तत्कालीन असर साम्य भयो भने भारतीय बजारबाट पूँजी बाहिरिने सम्भावना कम हुने हाम्रो अनुमान छ । किनभने, अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्क (फेड) ले आगामी २ वर्षसम्म त्यहाँको ब्याजदर नबढाउने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसो भएमा अमेरिकी बजारको तुलनामा हाम्रो बजारको प्रतिफल बढी हुनेछ र बाहिरिएको केही पूँजी पनि पुन: आउन थाल्नेछ । हाम्रो चालू खाता घाटामा भएकाले विनिमय दरमा परेको चाप भने केही समयसम्म कायम रहन सक्छ । तर, त्यसको प्रभाव भारतीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर रूपमा पर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन ।
त्यसैगरी, यदि अमेरिकाले भनेजस्तै आगामी २ वर्षसम्म नरम तथा स्फीतिकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिरह्यो भने प्रमुख वस्तुहरू खासगरी कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि हुन सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय बजारमा पर्ने भएकाले आन्तरिक वस्तुको मूल्यमा थप वृद्धि हुन सक्छ । अर्को कुरा, अहिलेकै घटनाक्रमले सुस्त हुँदै गएको विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति थप ढिला भएमा मानिसहरूले भनेजस्तै अर्को आर्थिक मन्दी (डबल डिप रिसेशन)को जोखिम बढ्न सक्छ । तर, मेरो विचारमा अहिले डबल डिप रिसेशनको सम्भावना छैन । यदि, त्यस्तो भइहालेमा विश्वबजारमा भारतीय उत्पादनको माग घट्न गई हाम्रो निर्यात तथा आर्थिक वृद्धिमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ ।
अमेरिका वा यूरोपमा केही भयो भने त्यसले संसारभर नै लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ र त्यसबाट भारत पनि अछुतो रहनेछैन । हामीहरू जति टाढा भए पनि आखिर एउटै संसारमा भएकाले त्यहाँको कुनै पनि घटनाले भारतीय शेयरबजारमा लगानी गर्नेको मनोवृत्तिमा पनि असर गर्छ ।
लामो समयदेखि प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्राका रूपमा स्थापित अमेरिकी डलरले आफ्नो स्थान गुमाउन लागेको भन्ने विषयमा छलफल पनि हुने गरेका छन् । तपाईंलाई त्यस्तो होजस्तो लाग्छ ? साँच्चै अमेरिकी डलरले आफ्नो स्थान गुमायो भने भविष्यको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित (माध्यम) मुद्राका बारेमा यहाँको धारणा के छ ?
अहिले संसारको कुनै पनि कुनामा निर्वाद चल्ने एउटा मात्र अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्रा अमेरिकी डलर नै हो । तर, यथार्थ के हो भने अमेरिकाको बढ्दो ऋणका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र दिनदिनै कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसैले, अहिले अमेरिकाको क्रेडिट रेटिङ घटेको हो । त्यसैका कारण अमेरिकी धितोपत्रहरूको प्रतिफल दर (इल्ड) पनि लगातार घटिरहेको छ । फलस्वरूप, सुरक्षित लगानी (सेफ हेभेन)का रूपमा स्थापित भएको अमेरिकी डलरप्रति संसारभरिका लगानीकर्ताहरूको मोह क्रमश: भङ्ग हुँदै गएको छ । साथै, एउटा मात्र अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्रा हुँदाका अप्ठयाराहरूको पाठ केही समयदेखि कायम यूरोपियन ऋणसङ्कट तथा हालैको अमेरिकी बजारको दूरावस्थाबाट सबैले सिकिसकेका छन् । त्यसकारण, एकभन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्रा भएमा यो विश्व अवश्य पनि अहिलेभन्दा बढी सुरक्षित हुनेछ भन्ने सबैले बुझेका छन् ।
यद्यपि, अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्राका रूपमा विश्वबजारमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व र हैसियतलाई कुनै एक कोठेबैठकको निर्णये तत्कालै चुनौती दिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैगरी, केही देशका प्रतिनिधि भेला भएर कुनै अर्को देशको मुद्रालाई अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्रा घोषणा गरेर मात्रै पनि त्यो लागू हुँदैन । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्राका रूपमा प्रस्तावित अर्को मुद्रा वा तिनीहरूको समूहले विश्वअर्थतन्त्रका वास्तविक मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले, अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्राका अपेक्षार्थीहरूले केही स्थापित मान्यता र कठिन मापदण्डहरू पहिले पूरा गर्नुपर्छ । जस्तै : आफ्नो मुद्रालाई सञ्चित मुद्रा बनाउन चाहने देशको पूँजी खाता पूर्ण परिवर्त्य हुनुपर्छ । अन्य मुद्राहरूसँग त्यसको विनिमयदर बजारको माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धारण भएको हुनुपर्छ । त्यस्तो मुद्रा कुनै पनि वित्तीय बजारमा सजिलैसँग ग्रा⋲य हुनुपर्छ र सम्बन्धित देशका मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिले अन्तरराष्ट्रिय जगत्को विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । ती मापदण्ड पूरा गर्ने देशहरूले मात्र आफ्नो मुद्रालाई अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्रा बनाउने विषयमा सोच्न सक्छन् । त्यसैले, तत्कालै अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्राका लागि अमेरिकी डलरको विकल्प देखिँदैन ।
समयसमयमा दक्षिण एशियाली साझा मुद्रा (सार्ककमन करेन्सी)को कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । तपार्इंको विचारमा के कुराले त्यसलाई रोकेको होला ?
दक्षिण एशियाली साझा मुद्रा प्रचलनमा आउन सक्छ । तर, त्यसका लागि यो क्षेत्रमा एउटा मौद्रिक सङ्गठन (मोनिटरी युनियन) हुनुपर्छ । मौद्रिक सङ्गठन निर्माणको बाटोमा हामीहरू निकै पछाडि छौं । जबसम्म यो कार्य सम्पन्न हुँदैन, तबसम्म साझा मुद्राको सपना साकार हुन सक्दैन । साथै, साझा एशियाली मुद्राको कुरा गर्दा यूरोपको अनुभवलाई पनि एकपटक मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, साझा मुद्रामा जानका लागि निश्चित मापदण्डहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ, जुन हामीभन्दा धेरै विकसित र परिपक्व यूरोपियन देशहरूले पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । साझा मुद्राका लागि दक्षिण एशियाली देशहरूमा अर्थतन्त्रको संरचना तथा संस्थागत विकासजस्ता तत्त्वहरू निकै कमजोर छन् । त्यसैले, अहिले नै हामीहरू दक्षिण एशियाली साझा मुद्राको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।
नेपाली बजारमा रू. ५ सय तथा १ हजार दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । निकट भविष्यमा आरबीआईले यस विषयमा आफ्नो नीति परिवर्तन गर्ने कुनै सम्भावना छ ?
खुला र वैधानिक रूपमा भारतीय मुद्राको कारोबार गर्ने नेपाल मात्र एउटा देश हो, जसलाई हामीले एक विशेष अवस्थाका रूपमा लिएका छौं । भारतसँग सीमा जोडिएका अन्य देशका नागरिकहरूले नेपालीले जस्तै खुला रूपमा भारतीय मुद्रा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । त्यो पनि एउटा समस्या हो । नेपालमा भारू ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिबन्धित गर्नुको प्रमुख कारण नेपाल-भारत सीमामा हुने नक्कली मुद्राको कारोबार रोक्नु र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न सहयोग पुर्याउनु हो । ती गम्भीर विषय हुन् र अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसैले, तत्कालै यस विषयमा पुनर्विचार हुने सम्भावना छैन । यदि, परिस्थिति फेरियो र विश्वासको वातावरण बन्यो भने हामीले पुनर्विचार गर्न सक्छौं । मुख्य कुरा के हो भने यो नेपाल र भारत सरकारबीच सहमति हुनुपर्ने विषय भएकाले कुनै पनि समयमा दुई सरकारको बीचमा सहमति भएमा आरबीआई नीति परिवर्तन गर्न तयार छ ।
भारतबाट नेपाल आउने विप्रेषण अझै पनि पूर्णरूपमा औपचारिक बैङ्किङ प्रणालीमार्फत आउन सकेको छैन । भारतमा नेपाली बैङ्कहरूको उपस्थिति नहुनु त्यसको प्रमुख बाधक भएको भन्ने गरिन्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
मेरो विचारमा नेपाली बैङ्क भारतमा वा भारतीय बैङ्क नेपालमा हुनु वा नहुनुले विप्रेषण प्रवाहमा कुनै असर गर्दैन । तर, ध्रुवसत्य के हो भने जब विप्रेषण अनौपचारिक माध्यमको सट्टा औपचारिक बैङ्किङ प्रणालीबाट र नगदको सट्टा कागजी वा विद्युतीय वित्तीय उपकरणका रूपमा भित्रिन थाल्छ, तब यो समस्या स्वत: सम्बोधन हुन्छ । र, बैङ्किङ प्रणालीबाट यसको आप्रवाह पनि परिष्कृत र प्रभावकारी बन्दै जान्छ । अधिकांश निम्न आय हुने मानिसहरूमा प्रविधिको ज्ञान नभएकाले उनीहरू नगदमा नै कारोबार गर्न रुचाउँछन् । तर, जब उनीहरूको आयस्तरमा सुधार हुन्छ र उनीहरूसँग वित्तीय सेवाको पहुँच सहज हुन्छ, तब विप्रेषणसँग सम्बन्धित धेरै समस्या आफै समाधान हुँदै जान्छन् । त्यसैले, यो विकासको प्रक्रिया हो ।
नेपाली र भारतीय मुद्राको आबद्धता (पेगिङ) कहिलेसम्म कायम रहला ?
यो विषय निकै गहिरो अध्ययन र दुई देशबीचको छलफलको विषय हो । त्यसैले, विनाअध्ययन यसै भन्न मिल्दैन ।